श्रावण महिनामा भुलेर पनि नगर्नुहोस यी काम ! -
श्रावण महिनामा भुलेर पनि नगर्नुहोस यी काम !
छुच्ची नानी शो
भगवान शिवलाई समर्पित गर्दै यो श्रावण महिना सुरु भइसकेको छ । श्रावणको महिना भगवान भोलेनाथलाई प्रिय महिना हो । यो समयमा माहौल नै थप धार्मिक बन्ने गर्दछ । शास्त्रका अनुसार अन्य दिनको अपेक्षा भन्दा श्रावण महिनामा भगवान शिव चाँडै प्रशन्न हुनेछन् । साथै यो महिना भगवान शिवको पूजा अर्चना गर्दा कयौँ गूणा लाभ मिल्ने बताइएको छ । तर पूजाको समयमा कयौँ पटक गल्तीहरु हुने गर्दछन् । यस्तै भगवान शिवको आराधना गरेको समय विशेष सावधानी अपनाउनु पर्दछ ।
श्रावणमा हरियो पत्ता भएको सब्जीलाई त्याग गर्नु राम्रो मानिन्छ किनकी श्रावणमा हरियो सब्जीमा पित्त बढाउने तत्वको मात्रा बढी हुने गर्दछ । यसको अलावा श्रावण महिनामा किरा र पत्ताको संख्या बढ्ने हुन्छ जुन स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । शिवलिङ्ग पुरुष तत्वसँग सम्बन्धित छ यसकारण कहिल्यै पनि शिवलिङ्गमा बेसार चढाउनु हुँदैन । श्रावणको महिनामा सात्विक भोजन गर्नु पर्दछ । यसमा मांस, मदिरा, प्याज र लसुनको सेवन गर्नबाट बच्नुहोस् । श्रावणको महिनामा दूध पनि पिउनु हुँदैन । यसकारण श्रावणमा शिवजी लाई दूधले अभिषेक गरिन्छ ।
विज्ञानले पनि यो मानेको छ कि दूधले पित्त पढाउने काम गर्दछ । श्रावणमा बैगून खानु पनि राम्रो मानिँदैन । वैज्ञानिक कारणले हेर्नुपर्दा श्रावणमा बैगूनमा किरा लाग्ने गर्दछ जसले स्वास्थ्यमा असर पुर्याउँदछ । कुनैपनि अपमान नगर्नुहोस् । कुनै पनि प्रकारको खराब विचार मनमा नलिनुहोस् । यदी घरको ढोकामा सांडे या गाई आयो भने त्यसलाई नभगाउनु होस, केही खानेकुरा दिनुहोस् । सांडेलाई पिट्नु शिवजीको बाहनको अपमान गर्नु हो ।
प्रकाशित मिति १० श्रावण २०७६, शुक्रबार ०८:१८